Powder Synephrine HCL Powder (5985-28-4) Mpanamboatra - Phcoker
Ny vovobony Synephrine HCL dia volo simika voajanahary voajanahary hita zavamaniry ary nalaina hampiasaina ho famenony …… ..
Rano Synephrine HCL vovoka (5985-28-4) video
Rano Synephrine HCL vovoka (5985-28-4) Specifications
Product Name Rano Synephrine HCL
Anarana simika Synephrine hydrochloride; 5985-28-4; 4- (1-Hydroxy-2- (methylamino) ethyl) phenol, hydrochloride;
Drug Class Vidy very
molekiolan'ny Formula C9H14ClNO2
molekiolan'ny Wvalo 203.666 g / mol
mitsonika Point 147-150 ° C
Teboka mangotraka 341.10 ° C. @ 760.00 mm Hg (est)
Application Mety misy ny fepetra fanampiny mihatra
Synephrine Raw levitra poana (5985-28-4) Description
Ny Synephrine HCL dia singa simika voajanahary hita amin'ny zavamaniry ary hita ho ampiasaina ho fanampiny. Ny '' skin '' Voasintona Raha ny tena marina, hita fa hita ao amin'ny tendron'ny oranjana izy io, izany no mahatonga azy io ho fantatra amin'ny hoe marika mangidy. Ny marika mangidy dia ampiasaina amin'ny olana maromaro toy izany ary koa ny olana hafa ankehitriny toy ny fahavoazana ary ny fanampiana amin'ny ady amin'ny tongotry ny atleta. Izy io dia iray amin'ireo singa fototra amin'ny marika mangidy ary noheverina ho fototra iorenan'ny fanasitranana ny zavamaniry Raw Synephrine HCL, izay azo inoana fa ny fatran-tsakafo marefo indrindra. Ny sneinephrine dia azo avy amin'ny oranges, ary rehefa manana izany dia afaka mandray soa amin'ny fomba maro samihafa.
Amin'ny maha-tsiran-tsakafo ara-pahasalamana azy, ny proteinina sy ny lefona HCL dia mety ho azo antoka ho an'ny ankamaroan'ny olon-dehibe rehefa ampiasaina araka ny tokony ho izy. Na izany aza, misy ny fiantraikany ratsy eo amin'ireo mpampiasa izay mitondra hnopenam-bozaka be loatra. Ny Synephrine dia fampandrosoana, noho izany dia zava-dehibe ny manomboka amin'ny dosia ambany mba hanombanana ny fandeferana. Mety hiteraka fihenam-bidy haingana, fitsaboana aretin-tsaina, fipoahan'ny hoditra, fitsaboana, tsy fahampian-tsakafo, fisalasalana, olana ara-pisefoana, fitaintainana, aretina, tebiteby, siramamy sigara sy tsy fitoviana amin'ny siramamy amin'ny rà, ny fanaintainan'ny vavony, ny fanaintainana ary ny aretim-pivalanana, indrindra raha mifandray amin'ny fitsaboana hafa.
Synephrine levitra vovoka (5985-28-4) Mechanism of Action
Ny fiantraikan'ny kardia vokatry ny fifindra-monin'ny ligand dia mifamatotra amin'ny fifandraisana amin'ny adrenergika. Amin'ny ankapobeny, rehefa mifatotra amin'ny mpanara-maso ny adrenero ny mpifindra monina, dia mitranga ny vasokonstriction, ary rehefa mifandray amin'ny receptors β1-adrenergic, ny fihenan-tsakafo sy ny fihenan'ny fo. Ny fandinihana dia mampiseho fa ny cynephrine hcl dia mamehy ny solosaina β3-adrenergic, ka mahatonga ny fitomboan'ny fahafahana manimba ny tavy. Ny fifandraisana amin'ny receptors β3-adrenergic dia tsy mampihena ny taham-pon'ny fo na ny tosidra. Indraindray, raha jerena amin'ny ankapobeny ny synephrine, na tsy misy ifandraisany amin'ny receptors α1-, α2-, β1-, ary β2-adrenergic ary tsy miseho amin'ny fampiroboroboana ny adrenergika indraindray, ny fiantraikan'ny kardinoa, toy ny fihenan'ny fo sy ny tsindrim-peo, dia tsy Niharan'ny doka mahazatra matetika izy ireo, fa tsy toy ny an'ny phenylethylamine hafa sy ny derivatives phenylpropanolamine. Ny fiovaovana ara-drafitra madinika dia miteraka fahasamihafana goavana amin'ny fifandraisana amin'ny adrenergika ary ny fahafahana mamokatra vokatra avy amin'ny fo.
Mampihena ny fampiasana karbôydrate amin'ny vatana ny tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiramamy amin'ny alalan'ny famokarana angovo bebe kokoa amin'ny endriny ATP.49-52 Manamora ny fikarakarana ny glucose amin'ny gliokaozy ao amin'ny sela, ny glycogenolysis, gluconeogenesis, glycolysis, ary ny oksizenina. Ny fampidirana ny ion-kalsiôma sy ny cAMP miaraka amin'ny mpitsabo mpanentana adrenero dia nasehon'izy ireo fa tafiditra ao anatin'izany dingana biochemika izany, izay manondro ny fandraisan'anjaran'ny rafitra maro.
Ankoatr'izay, ny fampiasana ny vodilaharana hcl synephrine dia manakana ny fampidirana ny NF-kB. Io zava-manan'aina io dia manan-danja amin'ny famongorana aretina amin'ny aretina toy ny asma. Ny fampiasana ny vovony Synephrine koa dia hita fa misy fiantraikany amin'ny hetsika eotaxine-1 hormone amin'ny ankapobeny. Izany dia manakana ny hetsiky ny eosinophil amin'ny faritra iray izay marefo.
Na dia tsy voaporofo tamin'ny alalan'ny fanandramana aza ny fampiasana ny hoditra Syntyrene hcl dia hita fa manakana ny asan'ny acetylcholinesterase. Ity tranga ity dia fantatra fa niteraka aretina Alzheimer.
soa amin'ny Synephrine levitra volo (5985-28-4)
Synephrine hcl noho ny fahaverezan'ny fahavoazana
Synephrine hcl manampy ny fiankinan-doha
Mihabetsaka ny fihenan'ny glucose mipetaka
Synephrine hcl improove manampy glycogenesis
Ny hormonina synephrine dia manampy amin'ny fihanaky ny diabeta
Mampitombo ny fandeferana ny hormonina synephrine
Mampihena ny hatsiaka eo anoloan'ny fandidiana ny hcl synephrine
Ny hormonina synephrine dia manatsara ny toe-piainana sy ny haavon'ny angovo
Ny cynephrine hcl dia manampy amin'ny fanaraha-maso ny bakteria mampidi-doza
Ny hcl synephrine dia manampy amin'ny fampihenana ny areti-maso
Synephrine recommandée levitra vovoka (5985-28-4) Dosage
Ny fatra Synephrine hcl fampiasa matetika dia manodidina ny 100mg isan'andro. Ity dia heverina ho ampy fatra afaka manatratra lanja very. Na izany aza, ny habetsaky ny soso-kevitra izay tsy tokony hihoaran'ny mpampiasa fatra dia 200mg isan'andro. Izay rehetra ambonin'ity marika ity dia heverina ho poizina ary hametraka ny olona amin'ny toe-javatra mety hiaina raft ny voka-dratsy ateraky ny fampiasana stimulants. Manoro hevitra anao, atombohy amin'ny, 10 ka hatramin'ny 20mg hahazoana antoka fa ny vovoka Synephrine hcl dia mifanaraka tsara amin'ny vatanao. Rehefa avy naka io fatra voalohany io dia tokony hanokana fotoana hanombanana ny valin'ny vatana amin'ny famenony. Raha salama tsara ny zava-drehetra dia azo ampiana fatra faharoa 20mg aorian'ny adiny roa. Ankoatr'izay, ny elanelam-potoana azo antoka indrindra dia ny mandray vovo-tany Synephrine hcl indray mandeha adiny roa.
Side effects amin'ny Synephrine levitra volo (5985-28-4)
Ny fampiasana Synephrine koa dia miaraka amin'ny voka-dratsiny toy ny fanafody hafa rehetra. Rehefa mpivady iray dos ny fampiasana synephrine hcl miaraka amina kafeinina. miaraka amin'ny voka-dratsy sasany. Ireto misy vokany ratsy sasany manaraka:
Ny tosidra ambony.
Ireto ny fo mamitaka.
Fahafatesana raha ampiasaina amin'ny dosage ambony alohan'ny fandidiana.
Aretin-kibo sy trombôs
Fihetseham-po amin'ny fo (fibrillation ventricular)
Ny fihenan'ny haavo (rhabdomyolysis)
Ny tsy fahombiazan'ny renirano
Ny fahavoazana ngeza noho ny tsindry mafy amin'ny hozatra (bilateral syndrome bilotra)
Ny fanaintainana boribory (variant angina)